के महरा सत्ताभोगी मात्रै हुन् ? – Janaubhar
के महरा सत्ताभोगी मात्रै हुन् ?
प्रकाशित मितिः आइतवार, फाल्गुन २७, २०७४ | 402 Views ||
के महरा शक्ति र सत्ताको केन्द्रमा बसेर ‘माखो’ नमार्ने गच्छदार नै हुन् त ? माओवादी आन्दोलनमा उनको कर्मले खास कुनै उर्जा दिँदैन ? के उनी सत्ताका लागि जुनसुकै धारमा बग्न र जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुन्छन्? के उनको राजनीतिक व्यक्तित्व ‘प्रचण्ड आशिर्वाद’मै अडिएको हो ? सूचना तथा सञ्चार, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्दा उनले कुनै उल्लेखनीय काम गरेनन् ?
यतातिर अलिकति विवेचना गरौं ।
माओवादी युद्धमै थियो। माओवादी युद्धलाई हेर्ने सन्दर्भमा प्रतिक्रियावादी कित्तामा रहेको मतभेदले ‘दरबार हत्याकाण्ड’ घट्यो। त्यसपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो। २०५८ साउन ४ गते सत्तापक्षले एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा ग¥यो। ४ दिनपछि त्यसको स्वागत गर्दै माओवादीले युद्धविरामको निर्णय लियो । त्यसपछि बनेको वार्ता समितिमा विद्रोही समूहका कमाण्डर थिए, नेता कृष्ण बहादुर महरा ।
युद्धविराम भए पनि ‘राज्यआतंक’का श्रृङ्खला रोकिएका थिएनन्। युद्धविराम भनिए पनि आतंक कायमै थियो । प्रचण्ड–बाबुरामसमेत समातिने र युद्ध समाप्त हुने धेरैको विश्लेषण थियो। तर, चुनौतीबीच महरा सतिसालझैं उभिए र विद्रोहीको तर्फबाट वार्ता टोलीको नेतृत्व गरे।
वार्तामा कुरा नमिले वार्ता टोली नै नियन्त्रणमा लिने सरकारी प्रयास पनि नभएको होइन । महरा नेतृत्वको टोलीले निकै कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन ग¥यो। यो ‘महरा परीक्षा’मा महत्वपूर्ण सफलता थियो।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । २०६३ माघमा अन्तरिम संविधान बन्यो, माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिका माग्यो र महरालगायतका ८३ जना नेता विधायक भए। यो महराको व्यक्तिगत रूचीभन्दा संसदीय मोर्चामा उनले खेलेको भूमिका, खुला राजनीतिमा उनको सर्वमान्य व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमताकै कारण थियो ।
पाटीभित्र महराले अधिकांश समय संगठन र विदेश विभागको जिम्मेवारी सम्हाले। कैयौं शक्तिकेन्द्र माओवादीलाई आतंककारी शक्ति ठान्थे। उनीहरूका दृष्टिमा माओवादी कुनै राजनीतिक शक्ति थिएन। त्यस्तो परिस्थितिमा माओवादीलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न महराले उल्लेख्य भूमिका खेले। संगठन विभागमार्फत् चाहेको भए उनले देशव्यापी गुटको अभ्यास गर्न सक्थे। तर, महराको सम्पूर्ण ध्यान एकीकृत पार्टीकै निम्ति केन्द्रित रह्यो ।
परराष्ट्र मन्त्री हुँदा उनले स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीतिको अभ्यास गरे । २ छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न महरा सफल भए । त्यही बेला एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट, सबैभन्दा बढी मतले धेरै वर्षपछि मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा नेपाल निर्वाचित भयो। देउवा सरकारका सफल मन्त्रीमध्ये महरा पनि एक थिए । यसरी उनले सम्हालेका चारै मन्त्रालयमा सकारात्मक नतिजा आयो। यसलाई सजिलै बिर्सन मिल्ला? कि वर्तमानमा इतिहासको कुनै मूल्य हुँदैन ?
महरा र गच्छदारको तुलना आफैंमा आग्रहको पराकाष्ठामा उभिएको छ। नेपाली राजनीतिमा गच्छदार सत्ता स्वार्थका लागि जे–पनि गर्न तयार पात्रका रूपमा चिनिन्छन् ।
के महराले त्यसो गरिरहेका छन् ? के उनले नैतिक मूल्य, राजनीतिक चरित्र र आदर्श छोडेर बार्गेनिङ गरेका छन्? के उनी पार्टी नीतिविरुद्ध उभिएर लाभको पद हत्याएका छन् ? कुनै पनि तथ्यले यी प्रश्नको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन।
महराका पनि सीमा र कमजोरी पक्कै छन् । अन्तर्मूखी स्वभाव, कमजोर स्वास्थ्य, काम गर्न जान्ने तर हल्ला गर्न नजान्ने कार्यशैली उनका सीमा हुन् । स्वाभावजन्य सीमाहरु अपराध होइनन् । उनी कृतिमता जान्दैनन्, आफ्ना कामको जस अरुले लिएको खास वास्ता गर्दैनन् । यही कारण महराको योगदान ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भइरहेछ ।
प्रचण्ड ३० वर्षदेखि निरन्तर माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वमा छन्, यो उनलाई कसैले ‘कृपाले बक्सिस’ दिएको होइन, उनको प्रतिभा, संकल्प र योगदानको मूल्य हो, यही कुरा महराको हकमा पनि लागू हुन्छ। तसर्थ, महराको निषेधात्मक आलोचनापूर्व उनका योगदानतिर पनि फर्कने चेष्टा गर्ने कि ?
Prevमहरा माओवादीका `गच्छदार´ कि `छाया प्रचण्ड´ ?
Nextनेकपा नेताको दावी– ‘जनयुद्ध’ फिल्म मध्यान्तरमा